ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: ဒါဟာ အချစ်တဲ့လား ....................?
ဒါဟာ အချစ်တဲ့လား ....................?
ညချစ်သူ | 1:16 AM | အတွေးရသစာစု
သူငယ်ချင်းတို့ ရေ ဒါဟာအချစ်တဲ့လား ဆိုပြီးသီချင်းဆိုနေတယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ။
အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိလဲ ၊သိချင်တာနဲ့ ပြီးတော့ ရေးချင်စိတ်
ပေါ်လာလို့ရေးလိုက်တဲ့ အချစ်အကြောင်း ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုပါ ။တကယ်ဆို
ရေးနေတဲ့ ကျွန်တော်လည်း အချစ်အကြောင်းမသိပါဘူး ။ကြားဖူးနားဝ ရှိတာလေး
တွေကို စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်အောင်ရေးကြည့်တာပါ ။
အချစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိမှန်းမသိတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ခုလို့ ထင်ပါတယ် ။လူတွေ
ကကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်နေကြတာလို့ကျွန်တော်က
တော့တွေးထင်မိတယ် ။တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ ပုံသေသတ်မှတ်လို့ မရတဲ့ အရာ
တစ်ခုလို့ ထင်ပါတယ် ။
၁။ သူ့အတွက် ပေးဆပ်ချင်နေတာလား ? အဲဒါဆို ခင်ဗျားရဲ့အချစ်က ပေးဆပ်ခြင်းပဲ။
၂။ သူ့ရဲ့အချစ်၊ ဘ၀ ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တာလား? အဲဒါဆို ရယူပိုင်ဆိုင်လိုခြင်း။
“အချစ်” ဆိုတာ ချစ်နေဘို့ပါပဲ... တဲ့
အချစ်ဆိုတာ "love is blind" တဲ့...
အင်း အချစ် အချစ် မင်းဟာလူတွေအပေါ်မှာတော်တော်လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့တစ္ဆေကောင်ဘဲ
လို့ ကျွန်တော်က ထင်မြင်မိပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် ~~~ အချစ်ဟာဖြေရှင်းမရတဲ့ ပြဿနာ ~~~~ အချစ်ဟာ အဖြေရှာမရတဲ့ ပုစ္ဆာ ငါကိုယ်တိုင်အချစ်ဟာဘာလဲ မသိတော့ပါ ~~~~
နားလည်လို.လဲ ၊ အချစ်ကိုကောမလိုချင်ဘူးလားလို.မေးလာခဲ့ရင်တော့
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ဘာမှနားမလည်ပါဘူး ၊ ဥာဏ်မီသလောက်တွေးကြည့်တာပါ
အချစ်ကိုကောမလိုချင်ဘူးလားဆိုတော့ ဟဲဟဲဟဲ လိုချင်တာပေါ့ ။
အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ အကြိမ်ကြိမ်ခါခါ လူတိုင်းကိုရော ကိုယ်တိုင်ပါ အကြိမ်ကြိမ်
ခါခါမေးမိပေမယ့်..ခုချိန်ထိ အချစ်ဆိုတာဘာလဲ...အချစ်ဆိုတာ ဒါပဲ.လို့လက်ခံနေရတုန်းပဲ..
အချစ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိဖို့ ခက်ခဲနက်ရှိုင်းတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပေါ့ ညချစ်သူရေ။